တရုတ်ထုတ်..“ဖေါ့ဖိနပ်”တွေစီးရင် သတိထားကြ။။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Health & Fitness » တရုတ်ထုတ်..“ဖေါ့ဖိနပ်”တွေစီးရင် သတိထားကြ။။
Posted by “ဘီလူးကြီး”ogre on Oct 22, 2011 in Health & Fitness | 30 comments
အသားအရေနဲ့ ဓါတ်မတည်သူများအတွက် သတိထားဖို့ပါ
ကျုပ်တို့ မြန်မာက တိုက်ခန်းနေအိမ်ရှင်မများနှင့် လူတန်းစားအလွှာစုံ ကစီးတတ်ကြတဲ့
စလစ်ပါ ဖေါ့ဖိနပ်ကလေးတွေပါပဲ အရောင်းအသွေးမျိုးစုံ တံဆိပ်မျိုးစုံနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက ၀င်ရောက်လာတာပါ
ဒီဖိနပ်တွေကို အိမ်ရဲမီဖိုခန်းမှာ ဟင်းချက်ထမင်းချက်ရင်း စီထားတတ်သလို ပြင်ပ သွားလာရာမှာ ပေါ့ပေါ့ ၀တ်ဆင်တတ်ကြပါတယ်
ရေအိမ်အ၀င်အထွက်တွေမှာလဲ ရေအိမ်သုံး အတွက် ဆောင်ထားတတ်ကြပါတယ် ဆင်းရဲသားလူတန်းစားအတွက်တော့ ဘယ်နေရာ
သွားသွား စီးတတ်ကြပါတယ် ဈေးနှုန်းကလဲချိုသာပါတယ် ဒါပေမယ့် အဲဒီဖိနပ်တွေဟာ အရေပြား ဓါတ်မတည့်သူများအတွက်တော့
အောက်မှာပြထားသလို မဖြစ်ကြစေဘို့ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်……… ဈေးပေါတယ် အန္တရာယ်တော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျား။။။
ဖော့ ဖိနပ် (စလစ်ပါ)တွေကိုသတိထား စီးကြစေဘို့ စေတနာဖြင့် မန်းဂေဇက်ပရိတ်သတ်အတွက်တင်ပြပေးအပ်ပါတယ်..။။
အိမ်က မိန်းမ ကို သတိပေးရဦးမယ်ဗျို့ 
မိန်းမ က ဈေးပေါပေါနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး စလစ်ပါလေးတွေ ဆို လွှတ်ကြိုက်တာကလား
ကိုဘဲလူး ပုံတွေ မြင်ရင်တော့ သူ သေချာပေါက် လန့် သွားမှာ သေချာတယ် ဗျို့ 
မိန်းမရှိတဲ့လူတွေများ ကော့မန့်မှာတောင် မိန်းမ ထည့်ကြွားသေး …
မနက်ဖန် ဘယ်လို ပွဲ ဖြစ်မလဲ ဘဲ
အရမ်းသိချင်နေပြီ ဗျို့ 
ကျနော်က ဖော့ဖိနပ်ပဲ စီးတာ.(အဲတာပဲ စီးနိုင်လို့ )
သူများက ရေအိမ်.မီးဖိုထဲစီးတာ..အနော်က အပြင်ဒိုးလဲစီးတာဘဲ
၀ါးတီး.အလှူတွေဘာတွေရှိမှ ကတ္တီပါ ဖိနပ် စီးတာ
အပေါစားနဲ့ဓာတ်တည့်တယ်ထင်ပါ့
ခုမှ မြင်ဖူး ပေတော့တယ် ၊
နီးစပ်ရာတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးလိုက်ပါ့မယ် ။
လူတိုင်းတော့မဖြစ်နိုင်ပါ။ကိုဘီလူးရေးသလိုဘဲ ဓာတ်မတည့်တဲ့သူမှ ဖြစ်မှာပါ။
ဓာတ်မတည့်မှုကတော့ ကိုယ်နဲ့သာဆိုင်ပြီး တရုတ်ဖိနပ် ယိုးဒယားဖိနပ် မဆိုင်လို့ မြင်မိပါတယ်။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သတိပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…
ကျေးဇူးတင်တာတောင်မြန်မြန်တင်ရတယ် ကော်နတ်ရှင်ကြီးက အိပ်အိပ်သွားလို. ဟိဟိ
ဖိနပ် တွေကတော့ စီးချင်စရာ ဖန်စီ လေးနော်
ဒါပေမဲ့ ပုံတွေမြင်ရတာ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာပါ
တစ်မြန်နေ့က ဝယ်ထားမိတာ တစ်ရံတော့ရှိနေတယ်
အဲ့လိုဖိနပ်စီးတဲ့လူတွေ ပတ်ဝန်းကျင်မှာအများကြီးပဲ ဘာမှမဖြစ်ကြဘူး။ ပုံထဲကလူကတော့ ဘယ်လိုစီးမှန်းမှမသိတာ။ ဓာတ်မတည့်တာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ထင်တာပြောရရင် အဲ့ကောင်မလေး တခြားဖိနပ်စီးလဲ အဲ့လိုဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပဲ။
အပြင်ထွက်ရင် မြင်းကြယ် ဖိနပ် အ၀ါ စီးတယ်။
အိမ်က မီးဖိုချောင်မှတော့ ဆင်ကြယ် ဖိနပ် အဖြူ စီးတယ်။
ဟိဟိ.. အလကား နောက်တာ.. တိုင်းတပါး ပစ္စည်း အားမပေးဘူး ပြည်တွင်းလက်ဖြစ် စစ်စစ် တာရာလှီးထားတဲ့ ဖိနပ် ပဲ စီးတယ်။ အမြင်မလှပေမဲ့ အစဉ်ထာဝ အတူနေပေးမယ် ဆိုလို့ပါ။
ဈေးပေါပေါနဲ့ ထုတ်ရောင်းနိုင်အောင်၊ကုန်ကြမ်းကို ဘယ်လိုဟာတွေသုံးထားမှန်းမသိတော့ ၊ ဒါမျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ် ဆိုတာပေါ့။
တစ်ခါမှတော့ အဲလို ဖြစ်တာ မတွေ့ဖူးဘူး
သတိတော့ထားမှ ကျေးဇူးပဲ ကိုဘီလူးကြီးရေ ………….
ကိုပေလို ကြွားစရာ မရှိတော့လည်း ရွာထဲ့ ကိုယ့်အစ်မတွေကိုပဲ မစီးပါနဲ့လို့ ပြောချင်ပါကြောင်း
ဒီ ပို့စ ကို ကွန်မန့်ပေးရမယ် ဆိုရင် MG မှာပဲ အရင်က ဖတ်ဖူးသလို ပဲ ။ ပြောချင်တာက ။ ဘယ်အရာ မဆို ဓာတ်ပုံ သုံးလေး ပုံရိုက်ပြ ပြီး သက်သေ အထောက်အထား ပြည့်ပြည်စုံစုံ မပေးနိုင် ရင် မယုံ သင့်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ် ။ ဒီကိစ္စ မှာမှ မဟုတ် ပါဘူး ။ အရာရာ မှာ ဒီ အလေ့အထ ကိုထား နိုင်မှ သူများ အလိမ် အညာ မခံ ရမှာ ပါ ။ ဒီမှာ လုပ်ကြံသတင်း ကို TV မှာတောင် ရိုက်ပြ တာ ။ လှုပ်ရှားမှူ ရှိတာ လဲ လိမ် လို့ရတာပဲ လေ ။ အဲ့ဒီ သတင်းထောက် တဖြစ်လဲ နိုင်ငံရေး သမားလဲ အလိမ်ပေါ်လို့ နိုင်ငံရေးလုပ်စား လို့မရ လောက်အောင် အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်သွား သေး တယ် ။
ပြောလို့မရပါ.. ..ကျုပ်ရေးတာလဲ သတင်းမဟုတ်ပါ
ဥာဏ်ဖြင့်သာ တည့်မတ်တည်ဆောက် နိုင်ကြဘို့ပါ..။။
ဒီ နေရာမှာ ကွဲလွဲ ပါမယ် ။ အကျိုးအကြောင်း တခုတိတိ ကျကျမ ဟုတ်ပဲ ပြောရင် အရပ် စကားပဲ ၊ rumour ပဲလို့သတ် မှတ်နိုင်ပါတယ် ။ နောက် တခု ဒီလောက်အကြာကြီး internet ထဲမှာတောင် ဆက် ပြီး ပြန့်ပွါး နေနိုင်တာ ပဲ ။ တကယ် မဟုတ် ရင် ဒီမှာ ဆို လုပ်ငန်း ပိုင်ရှင် က တရား စွဲနိုင် သလို ၊ တကယ် ဟုတ်ခဲ့ရင် လဲ လုပ်ငန်း ပိုင်ရှင် က ထိုက်သင့် သလို ရော်ကြေး ပေး စသည် quality ကို ပြုပြင် ဖို့အပြုသ ဘောမျိုး လုပ်ရ ပါ တယ် ။ အဓိက ကတော့ consumer foundation လို စားသုံးသူ နဲ့ လုပ်ငန်း ရှင် ကို တရား ဥပဒေ နဲ့ ထိမ်း ပေး မဲ့ အဖွဲ့ မရှိတာပါ ပဲ ။
သတိ ထားသုံးစွဲ တာ ကိုအပြစ် မပြောပါ ။
တိတိကျကျ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲခင်ဗျာ
မီး မလောင်ပဲနဲ့ တော့ မီးခိုးမထွက်ပါဘူး
မီးခိုးပဲထွက်တာပါ မီးမလောင်ပါဘူးလို့ လိမ်ပြောလို့ မရပါ
မီးရှိနေလို့သာ မီးခိုးထွက်တာပါ ဖေါ်ပြပါအဖြစ်အပျက်တွေ ရှိနေလို့သာ
ဒီလို သတင်းထွက်လာရခြင်းပါ ဒီကိစ္စဟာ အတန်ကြာသောကာလကဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာ မှန်ပေမယ်
တစ်ကယ်ဖြစ်ခဲ့လို့ သာ ဒီလိုမျိုးတွေ့ရခြင်းပါ ..အဲဒါဟာ ကောလဟာလပါပဲ
ဒါပေမယ့် မီးမရှိပဲနဲ့တော့ မီးခိုးမထွက်နိုင်ကြောင်းပါဗျား
လဲမဖြစ်ကောင်းပါ တွေးဆ ထင်မြင်ပုံခြင်းသာလွဲရင်လွဲနေမှာပါ
ဒါပေမယ့် တစ်ကယ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေများပါတယ် လို့ပြောခြင်ပါတယ်..။။။
မီးမရှိပဲနဲ့ မီးခိုးထွက်လို့ရတာတွေအများကြီးပဲနော်… ဂျပန်က နင်ဂျာကားတွေသုံးတယ်တဲ့။
ဥပမာ – မြန်မာမှာဆို မင်္ဂလာဆောင်တွေမှာသုံးဖို့ ရေခဲခြောက်ကို ရေလောက်ပြီး မီးခိုးတု လုပ်တယ်။ (ကြက်ပေါင်ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ မီးခိုးကိစ္စ သိသလောက်ဝင်ပြောကြည့်တာပါ။)
ကောလာဟာလ ဟာ( မီးရှိနေလို့သာ မီးခိုးထွက်တာပါ ) ဆိုတဲ့ အဆိုနဲ့ ကိုက်ညီတယ်လို့ မထင် ပါ ။ အမှန်တရား ကသာ ဒီအဆို နဲ့ ကိုက်ညီ မှာပါ ။ ကောလာဟာလ ဟာ မီး မရှိ လည်း တငွေ့ငွေ့ နဲ့ ထွက် အောင် လုပ်လို့ရ နေ တဲ့ ဇတ်စင် ပေါ်က လုပ်ကြံ မီးခိုး နဲ့တူတယ်လို့ ထင် ပါတယ် ။ တိကျ တယ်ဆို တာလည်း ၊ ဘယ်သူ ဘယ်အရပ် ဒေသ ဘယ်တုံး က ဘယ် ဆိုင် မှာဝယ် တာ စသဖြင့် ပေါ့ ။
ကျုပ်သိတာကိုမျှဝေခြင်းဖြစ်လေတော့ အမောင်စွမ်းနိုင်က လုပ်ပါလေ
ကျုပ်စိတ်ထင်ရင် မြန်မာပြည်မှာ လုပ်တဲ့ ကြက်ပေါင်ဖိနပ်ထုတ်လုပ်သူများ zoe့ ဖြစ်နေမလားပဲ
အများသုံးနေကြတဲ့ အင်တာနက်က တဆင့် ပြန်လည်မျှဝေတဲ့ မေးလ်က ရလေတော့
မောင်မင်းကြီးသား ဒီကိစ္စ အင်တာနက်မှာသာရှာပါလေတော့ ဘယ်ဆိုင်ဘယ်တံဆိပ်
အမောင်သိလိုရာ အမောင်စုံစမ်းပါလေ ကျုပ်ကတော့ သိသမျှ ဆက်လက်မျှဝေခြင်းပဲဖြစ်လို့
အမောင်ပဲ လုပ်ကြံမီးခိုးနောက် တောက်လျှောက်သာလိုက်ပါလေတော့
ကွန်မင့်တွေအရ ၊ ယခုဖိနပ်အကြောင်းအရာ ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး zoe တစ်ယောက် ဆတ်ဆတ်ထိမခံ ဖြစ်နေပုံ ထောက်သော် ၊ zoe မှာ ကြက်ပေါင်ဖိနပ်အဟောင်းများကိုအမှုန်ကြိတ်ပြီးပြန်ပေါင်းထုတ်တဲ့ စက်ရုံပိုင်ရှင် (သို့ မဟုတ် ) နီးရာဆွေမျိုး ( သို့ မဟုတ် ) ဝန်ထမ်း ခ အလုပ်သမား တစ်ယောက် ဖြစ်နိုင်ပါသည် ။
ထပ်ပြော မယ်မဟုတ် ဖူး ။ အထင် နဲ့ ပြောတာလဲ ကောလာဟာလ ပဲ ။
မဟုတ် ဖူး ၊ ဟုတ်ရင် ရေဆုံးရေဖျား လိုက်ကြည့် ချင်တယ် ။ အမေးရှိလို့အဖြေရှိတာ ။ အခု လဲ ကိုယ့် အထင် ကိုယ့်ဖာသာ ပြော နေတာ ပဲမဟုတ် လား ။ personal ဖြစ်သွားရင် လဲ တောင်းပန် ပါတယ် ။
ထိုင်ဝမ်က.. ဇိုးမမ.. ပေးချင်တာက.. ဖေါ်ဝပ်မေးလ်တွေ.. ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ.. တွေ့တိုင်း တန်းမယုံပါနဲ့.. လုပ်ကြံတာတွေရှိပါတယ် ဆိုတဲ့ မက်ဆေ့ရ်ှလို့ ထင်မိတာပဲ..။
ဖိနပ်ကိစ္စမှမဟုတ်.. တခြားစာတွေ..သတင်းတွေကိုပါ ခြုံပြောတာ ယူဆမိတယ်..။
တကယ်တော့.. ဒီဖိနပ်ကိစ္စက အဖြစ်မှန်ပါတဲ့..။
Wal-Mart မှာ ၂၀၀၇က တင်ရောင်းလိုက်တာ.. ပြဿနာဖြစ်သွားတာပါ..။
အရံ ၇သန်းထုတ်ရောင်းတာမှာ.. ၁၀ရံ
့.. လူ၁၀ယောက်က.. အလာဂျီဖြစ်သွားတာမို့..
နောက် ဆုံးတော့ သူကြီးဟာ သူကြီးပါပဲ ။ သူကြီးဖြေရှင်း မှလိပ်ပတ်လည် တော့တယ် ။ ကျေးဇူးပါသူကြီး ။
ဟုတ်ပ သူကြီးရယ် ကျုပ်မေးလ်ထဲကိုတော့ဒီအတိုင်းရောက်လာတာပဲ
သူကြီးလို ကွန်မင့်မှာပုံ တင်လို့ မရလို့ စာသာဖတ်ပါတော့..။။။
Now Is China Slippers s